PressReader - Ilanga: 2018-07-09 - Ukhale ngobunzima bokuyothwasa
Ukhale ngobunzima bokuyothwasa
Uthi bumhlukanise nezinto azithandayo
Ilanga - 2018-07-09 - Izindaba - PAMELA ZUNGU
UKHALA ngobunzima abuthwale ngesikhathi eyothwasa uLerato Mvelase waseNanda, ozakhele udumo ngokulingisa njengoba ethi kumhlukanise nomndeni nomsebenzi wakhe.
ULerato ulingisa emdlalweni owuchungechunge iSibaya esitshengiswa kuMzansi Magic (Channel 161) lapho edlala khona indawo kaSamkelo Mkhize - obeyiphoyisa.
Lo mlingisi ophinde abengumqondisi, uprojusa nomculi, utshele ILANGA ukuthi ubhekane nobunzima njengoba bekumele ashiye izingane zakhe ahambe eyothwasa izinyanga eziwu-6.
ULerato - ozakhele udumo emdlalweni iHome Affairs ebitshengiswa kuSABC 1 eminyakeni edlule - uthi indlela enqamulelayo kayisizi emkhakheni akuwona ngoba kayifikisani ndawo.
Uthi uma ungumuntu kubalulekile ukufunda ukuze uzokwazi ukuzimela, ungathembeli komunye umuntu. Utshele ILANGA ukuthi yena ugabe ngeDegree kwiDrama ayithole e-Wits Uni- versity ngo-2002 kwathi ngo2015 wathola ezeCommunications e-Unisa.
Uthi ubuciko ubuthande emncane njengoba ekhule ethanda ukucula nokulingisa. Utshele ILANGA ukuthi uprojuse umdlalo wamahlaya i-Him, Her and the Guys obutshengiswa kuSABC 1 - wumdlalo wakhe wokuqala omkhulu oqale ukutshengiswa kumabonakude.
Uveze ukuthi ubejwayele ukuprojusa nokuqondisa imidlalo yeshashalazi.
“Ngithole esontweni ukuthi nginekhono lokucula njengoba ngikhule ngicula khona. Ngikhuluma nje manje ngingene emculweni kanti sengikhiphe i- single ethi ‘SthingThing’,” kusho uLerato.
Uthi emkhakheni akuwona udinga umuntu okwazi ukubekezela ngoba umuntu otefayo ngeke aluge ngenxa yokuphoxeka uma uchithwa kwinhlolokhono.
“Uma ngingekho matasa, ngithanda ukuzikhipha nezingane zami impelasonto yonke si- yochitha isikhathi ndawonye,” kusho yena. Uthi ufuna ukuqala isikole lapho ezofundisa khona izingane ezithanda ukufunda kabanzi ngomkhakha akuwona, ukuze zingeke zigxile ezintweni ezibhedayo. “Ngikhuthaza intsha ukuba ifunde ukuze izokwazi ukuzimela futhi ingangeni ebugebengwini, kwazise budlangile ezweni lethu. “Ukuze behle, izingane zethu kumele zifunde ukuze zingeke zenze izinto engalungile,” ephetha.
ULERATO Mvelase uthi uya-thanda ukuchitha isikhathi nomndeni wakhe